Banyere Anyị - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Ụlọ ọrụ Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Anyị nwere ahịrị mmepụta na akụrụngwa zuru oke iji zute ikike mmepụta yana ndị otu nyocha ọkachamara anyị maka njikwa njikwa siri ike.OEM & ODM dị yana ndị otu anyị nwere ike inyere gị aka hazie aha nkeonwe gị. Ndị otu ahịa anyị ga -abụ awa iri abụọ na anọ ịza ajụjụ gị na idozi nsogbu gị. Maka nnyefe, anyị nwere nkwekọrịta na DHL, FEDEX, UPS, EMS, SF, TNT maka ụgwọ mbupu ka mma na nkwa njem.
Ogo bụ isi, ọrụ bụ injin. Anyị na-elekwasị anya n'inye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị elu yana ọrụ kacha mma. Ngwaahịa niile enyere anyị n'aka na-enweta nloghachi ma ọ bụ nkwụghachi n'ime ụbọchị ọrụ 7 ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na mbibi njem. N'otu oge ahụ, ndị otu anyị ga-erecha ahịa ga dozie nsogbu gị n'ime awa 24.
Ka ọ dị ugbu a, anyị ejere ndị ahịa si mba 50 gburugburu ụwa ozi, na 80% n'ime ha enyela nkwado na ekele maka ngwaahịa na ọrụ anyị, wee kwuo na ha ga -ejigide mmekọrịta anyị na -enwe. N'ime ha, ndị ahịa anyị gụnyere ndị na -azụ ụlọ ọrụ, ndị nkesa, ụlọ ahịa na -anọghị n'ịntanetị na ụlọ ahịa n'ịntanetị, wdg.
Ekpebisiri ike ijere ndị ahịa anyị ozi na ịnye ngwaahịa dị mma, anyị na -atụ anya inwe ọganihu na ịzụlite ya na ndị ahịa anyị. Anyị dịkwa njikere ka anyị na ndị ahịa anyị nwee mmekọrịta na-adịte aka ma kwụsie ike. Site na mmelite na-aga n'ihu nke ịdị mma na ọrụ ngwaahịa anyị, anyị nwere ike ime ka ndị ahịa anyị nwee mmetụta dị mfe ma nwekwuo ntụkwasị obi na anyị ga-akwado anyị, si otu a nweta ọnọdụ mmeri. Maka nsogbu ndị ahịa, anyị ga -enye ndụmọdụ na azịza ozugbo enwere ike, ka ndị ahịa ghara ichegbu onwe ha.
Mgbatị ntutu anya, mink lashes, egbugbere ọnụ, Ndị na -ere ntutu anya, Anya anya, eyeliner,